Zvinotaridza kuti iyo iPhone 7 Hongu ichave ne 3.5mm chiteshi | IPhone nhau
Iyi mifananidzo inoratidza kuti iyo iPhone 7 Ichave iine 3.5mm chiteshi
Nhau dzakanaka (pane runyerekupe) rwevamwe uye dzakaipa kune vamwe. Nhau dzakanaka kune avo vese vasingade Apple kubvisa iyo chiteshi chefoni 3.5mm nekusvika kwe iPhone 7. Nhau dzakaipa kune avo vanofunga kuti (muchidimbu) inguva yekubvisa iyo kuti itarise pachiteshi chinopa kurira kuri nani. Sezvatinoverenga muchiFrench svikiro NoKuTheOrse.fr, uko kwakawanda zvinhu zveiyo iPhone uye zvimwe zvishandiso zvave kutobviswa zvakabudirira, mufananidzo unosvika uchibva kuChina unoratidza chinofungidzirwa kuti chinhu cheiyo iPhone 7 iyo inosiya nzvimbo ye 3.5mm jack.
Mufananidzo uri pamusoro, wakatumirwa paWeibo, unoratidza chinhu chakafanana chaizvo neiyo iPhone 6s. Munzvimbo imwechete yemhando yapfuura, muchikamu cheiyo iPhone 7 pane nzvimbo yeMheni inobatanidza uye chiteshi zvakawanda zvakange zvataurwa zvaizobviswa. Kana iyo mifananidzo ikazove yechokwadi, panongova nesarudzo mbiri chete dzinogona kuitika: kuti ivo pakupedzisira vanosanganisira chiteshi chefoni kana kuti munzvimbo iyoyo vanoisa chimwe chinhu chisati chasarudzwa.
Iyo iPhone 7 inogona kuve nehedhifoni chiteshi
Nemashoko akawanda kwazvo pamusoro pokubviswa kwechiteshi che3.5mm, ini pachangu ndinoona zvichishamisa kunyora nezve zvakapesana. Indasitiri yemimhanzi inogamuchira kubviswa kweiyo headphone chiteshi nekuti inoganhurira mhando yemodhiyo. Mamwe makambani akaita seIntel anodawo kubvisa chiteshi ichi uye zvinoita kunge gore ra2016 richaratidza kutanga kwetsika nyowani ingangopedzisira yave iyo USB-C.
Semazuva ese, isu tichafanirwa kumirira kuti tione kana iyo iPhone 7 ichizosvika ine chiteshi chefoni kana kwete. Haizove nguva yekutanga kuti ruzivo uye zvinhu zvisina kuiswa muchigadzirwa zvekupedzisira zvisvinwe, kuti vanotaurira iyo iPhone 5s (uye ini ndinofunga zvakare iyo 5) uye yayo 12mpx kamera kana chip chip cheNFC chakataurwa nezvacho. zvakanyanya kusvika zvazobatanidzwa muiyo iPhone 6. Iwe unofungei? Ko Apple ichabvisa iyo 3.5mm chiteshi pane iPhone 7 kana kwete?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » Iyi mifananidzo inoratidza kuti iyo iPhone 7 Ichave iine 3.5mm chiteshi
Kuti pane nzvimbo hazvireve kuti vanoisanganisira, zvakafanana kuisa mutauri ari nani, kana kuitira kuti vatauri vave nebhokisi ravo resonance uye vanzwike zvirinani, kune zvakawanda zvinhu zvavanogona kuve, uye zviri pachena kuti jack haisi kuenda kuuya.
Ngatione Pablo, ESE midhiya (kunyangwe runyerekupe) zvinowirirana, uye kana VESE vachibvumirana ndinofunga izvi zvinopfuura pachena. Kunze kwekunge Apple yaona kuti nekubvisa iyo jeki uye nekusiya chete inobatanidza yekambani kutengesa kwayo kunowira zvakanyanya nekuti vanhu vanoona kuti chinhu chega chinofarirwa naApple imari yedu. Ndokureva kuti iyi inguva yekushandurwa kweminiti yekupedzisira (kuti zvese zvinogona kunge zviri), zvichipa kusagadzikana kwaizoitwa naApple.
Nenzira Pablo, iyi ... "Iyo indasitiri yemimhanzi inogamuchira kubviswa kweiyo headphone chiteshi nekuti inoganhurira iwo odhiyo mhando." ??? Ndokumbirawo, ndinokukumbira kuti ubatanidze mapeji mune izvo zvinonzi iyo indasitiri yemimhanzi inoona nemaziso akanaka kuti Apple inobvisa jack kuti isiye yayo inobatanidza chinongedzo (chenjera! Ini ndinokumbira iwe kune zvinongedzo kwete kune zvinyorwa zvinyorwa nekuti zviri pachena kuti imwe neimwe ine yavo chako, asi kune zvirevo zvechokwadi nemaindasitiri vakuru vanosimbisa izvi).
Nyaya yeIntel haina chekuita nazvo nekuti vanoibvisa asi havaise chinongedzo, asi icho chinenge choda kuiswa mumidziyo YOSE inotarisira kutengeswa muEurope. Huya, haina kana chekuita nazvo. Muchidimbu, ZVESE zvishandiso (kusanganisira iyo iPhone), zvichafanirwa kutakura USB-C chiteshi nekuti iri mutemo weEuropean. Isu takatotaura pane dzimwe nguva kuti dai Apple yakabvisa jack kuchinjana iyo USB-C ndingadai ndakavatevera nekuti zvirokwazvo chiteshi ichi inguva yemberi, Mheni, kunyangwe muEurope, haisi.
Mhoro, Alfonso. Kana ndichiti indasitiri yekuteerera inoda kubvisa iyo 3.5mm jack, handisi kuti ivo vanoda kuti ive Mheni, asi ivo vanoda iyo USB-C. Izvozvi handigone kubatanidza kune chero chinhu nekuti izvo zvinhu zvandanga ndichiverenga kwenguva yakareba, asi vanodaro. Handizive kana iwe uchiziva kuti iyo odhiyo mhando inogumirwa neyechinyakare chinongedzo. Kunyangwe iyo iPhone kana chimwe chishandiso chichigona kuburitsa odhiyo yedhijitari, iwo ma jack connectors akafananahttps://en.wikipedia.org/wiki/Phone_connector_%28audio%29). Zvandanga ndichiverenga kwenguva yakareba ndezvekuti kuti uterere kudhijitari odhiyo, chinobatanidza jack chinofanira kutsakatika.
Pasina kuenda kumberi, ini (zvakashata) ndinoridza gitare, mabhasi uye keyboard uye ndinoshandisa iyo USB pamberi pejack nekuti yazvino, pamwe nekuenderana nemidhi.
Zvakanaka, Pablo, uye ini handina mubvunzo newe, asi handina kumbobvira ndaverenga kuti chero mumiriri weindasitiri yemimhanzi ari kukumbira kubviswa kwechiteshi chakakura kwazvo kuti vateerere pachivande zvigadzirwa zvavo munhoroondo. Uyezve, zvinoita senge kupenga chaiko kwandiri nekuti nepfungwa dzakachena zvigadzirwa zvavo zvinosvika kuvanhu vashoma. Kana pane kudaro, panogona kunge paine zvimwe zvipingamupinyi pakuve nezvavanazvo izvozvi.
Ngatitaurei kuva vakatendeseka, unoziva here vanhu vazhinji vanosarudza kuti ndeipi nhare yekutenga nekuda kwemhando yeruzha yainayo? Kune iyo kamera ichiri, asi yeiyo ruzha mhando ye headphones? Iyo muzana iyo yaizotora iyi seyakakodzera dhata kuti isarudze kutenga kwayo mumaonero angu ingangove isina kukosha zvekuti haitombofungidzirwa. Nekudaro, iwe unosimbisa kuti Apple iri kukanganisa uye zvakare zvakadzama nekubvisa iyo jack uye kwete kuitsiva neiyo USB-C uye kana neayo inobatanidza yekubatanidza, handiti? Zvirinani ndizvo zvandiri kunzwisisa iwe uye kune rimwe divi ndizvo zvine musoro. Apple ichaipusha, iwe unoiziva, ini ndinoiziva, asi chakanyanya kukosha ndechekuti varimi vayo vanochizivawo uye ndosaka vari kutiza. Nhamo ndeyekuti havazvizive, vanotenda kuti munhu wese achavatevera semakwai zvakare kunyangwe vauya netsvimbo ine apuro yakarumwa-siriki yakarohwa, uye zviri pachena kuti izvi hazvizove zvakafanana.
Asi chengeta chinhu chimwe chete mupfungwa: musika wekufambisa ndiyo iyo inofambisa zvese nhasi. Kana paine panofanira kuve neshanduko, inofanira kutanga ipapo. Saka kuti unzwisise maonerwo andinozviita, handizive kana iwe wakamboona rekodhi mutambi weavo vaive nemutauri padivi payo (uye ini handisi kutaura nezve gramafoni xD). Unogona here kufungidzira nhaurirano iyi asi uchipokana kuti wedzera stereo here kana kwete? Ndine rekodhi yababa vangu yakaenda yese mubhokisi reorenji. Kuti tinzwe zvinyorwa mu stereo taifanirwa kutenga imwe yemazuva ano uye toibatanidza kune yekuwedzera. Huya, imwe yekuwedzeredza uye zvese izvo zvatakataura nezvazvo.
Icho chimwe chezvinyorwa zvandakaverenga chakataura ndechekuti vagadziri vazhinji vakamira uye havagadziri mahedhifoni emhando yepamusoro nekuti neiyi yekubatanidza hazvibviri kubereka nemhando yakadai. Pazvinokwanisika, pachave nemahedhifoni ari nani, aine mahedhifoni ari nani, mapuratifomu emimhanzi anotenderera (semuenzaniso) anozofanirwawo kupa mhando yepamusoro, hatizonzwa manzwi anopururudza nekusanganisa neakakwira magitare Ruzha rwuchangoita zvirinani, uye hauzoganhurirwa neyezana ramakore rechi19 analog jack.
Uye, chenjera, zvakatotanga. Kuti pane yatove nhare isina 3.5mm chiteshi http://www.androidauthority.com/first-phones-without-headphone-port-run-android-687910/
Kwete, kana yakatotanga zvakajairika. Kana iwe uchiziva kuti ini ndiri wekutanga kutaura kuti dai Apple yakadhonza iyo USB-C ndingadai ndakavatevera nekuti zviri pachena kuti munguva pfupi ichave iri kubatana kwepasirese, uye nepasirese ndinoreva zvese, kuchaja, data , kurira, zvese.
Dambudziko neApple nderekuti rakabvisa kubatana kwepasirese kuti riite zvaro uye ndizvo zvinounza mhedzisiro. Dai ndakabvisa kubatana kwepasirese asi kuisa imwe kubatana kwepasirese kwaisazove nekukurukura, taigona kutaura kuti kana mumwe munhu aifanira kutanga yaive Apple, asi kwete; zvichaitwa neApple kuyedza kuzadza homwe dzayo zvakare tichishandisa, uye kana tikasatenga zvigadzirwa zvavo zvinodhura senguva dzose (mune ino maheti, uye usanetseke kuti vagadziri vechitatu-bato vanofanira kuvabhadhara. kuisa MFI mubhokisi rake. Sezvandambotaura, bhizinesi rakanakisa. Vari kuenda kunochaja (bvisa mari muhomwe dzedu) hongu kana hongu.
Kuti zvese zvinofanirwa kushanduka zviri pachena, asi kubva ipapo kuenda kune izvo sezvawakasimbisa kuti vamiriri veindasitiri yemimhanzi vakati ivo vanoda kuti 3.5mm jack ibviswe, Pablo anoenda pasirese. Ini kunyanya handitendi kuti vataura zvakadaro. Chii chavaigona kunge vakati ivo vakamira? Zvinogona kudaro, kunyangwe paine mahedhifoni ane 3.5mm jack inopa zvisingaite mhando, seinoshamisa, hongu, semutengo wayo.
Ndakaiverenga, asi ikozvino unoita kuti ndinetseke kuti ndiani akazvitaura. Handizive kuti aive nyanzvi yekunzwika here kana kuti chii. Muchokwadi, ini ndanga ndisingazive kuti majack anga akaganhurirwa kusvika ndazoverenga izvo.
Fitbit CEO anofunga kuti Apple haina kururama nezveApple Watch
Covet Fashoni, iva nyanzvi yekugadzika nemutambo uyu